Onye isi ala Afghanistan gara biri na UAE site na nde $ 169 nke ego ezuru
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » ndị mmadụ » Onye isi ala Afghanistan gara biri na UAE site na nde $ 169 nke ego ezuru
Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa UAE • Akụkọ dị iche iche
Ministri mba ofesi nke UAE na mmekorita mba ofesi nwere ike gosi na UAE anabatala onye isi ala Ashraf Ghani na ezinụlọ ya na mba ndị mmadụ.
Onye isi ala Afghanistan chụpụrụ na -apụta na UAE.
A na -ebo Ashraf Ghani ebubo na o zuru nde $ 169 site na ọba ego Afghanistan.
UAE "nabatara" Ghani na ezinụlọ ya "na ihe enyemaka mmadụ".
Ministri mba ofesi nke United Arab Emirates wepụtara nkwupụta taa na-ekwupụta na mba ahụ ewerela onye bụbu onye isi ala Afghanistan Ashraf Ghani na ezinụlọ ya “n'ihe enyemaka mmadụ” mgbe onye isi ala a chụpụrụ gbapụrụ Afghanistan na Sọnde ka ndị Taliban bịarutere Kabul.
Ashraf Ghani na ezinụlọ ya ebirila ugbu a Abu Dhabi, isi obodo UAE.
Nkwupụta dị mkpirikpi, nke ezigara na webụsaịtị ndị ozi ala ọzọ nke UAE gụrụ nke ọma.
Ghani gbapụrụ Afghanistan ọtụtụ awa tupu òtù ndị agha Taliban abanye Kabul na -enweghị mmegide ọ bụla.
Amabeghị ụzọ ọ gara UAE ma ọ bụ mgbe ọ rutere ebe ahụ. Na mbu, akụkọ Kabul kwuru na ọ kwụsịrị na Oman, ebe o si Tajikistan bịa. Akwụkwọ akụkọ Hasht-e Subh Daily kwuru na Ghani si Uzbekistan gbaba na Oman.
Ọ hapụrụ isi obodo Afghanistan na nwunye ya Rula Ghani na mmadụ abụọ ndị ọzọ, na -ebo ebubo na ha nara ya $ 169,000,000 nke ego ezuru. Dabere na ụlọ ọrụ nnọchi anya gọọmentị Russia na Kabul, Ghani nwara iji nnukwu ego gbapụ na ọ nweghị ike ịbanye na helikọpta ya na ụfọdụ ga -ahapụrịrị n'ọdụ ụgbọ elu.
Onye nnochite anya Afghanistan na Tajikistan Muhammad Zohir Agbar kwuru na Onye isi ala Afghanistan Ashraf Ghani gbapụrụ na mba ahụ, were $ 169 nde site na ọba ego steeti.
Onye nnọchi anya mba ahụ kpọrọ mgbapụ nke onye isi ala Afghanistan "nrara nke steeti na mba" wee gbakwụnye na Ghani zuru $ 169 nde n'ụlọ akụ.
Dị ka onye nnọchi anya ahụ si kwuo, ọ ga -arịọ Interpol arịrịọ ka ejide Ashraf Ghani ma kpọga ya n'ụlọ ikpe mba ụwa.
Offọdụ ndị isi na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ndị ọzọ soro Ghani n'ịhapụ obodo ahụ, n'etiti ha, Marshal Abdul-Rashid Dostum, na Atta Muhammed Nur, onye buru ụzọ kwupụta agha megide ndị Taliban na mpaghara Balkh, onye bụbu osote onye isi oche nke National Security Council Serur. Ahmad Durrani, onye bụbu Mịnịsta na -ahụ maka nchekwa Bismillah Mohammadi na ọchịagha ndị agha mpaghara Herat Mohammad Ismail Khan.
Ụgbọ elu Sharm El-Sheikh, Luxor na Cairo na Qatar ...
Bangkok na -akwado nkwado maka nnukwu idei mmiri
Steven Malarski ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 18, 2021 na 16:16
Ọ dịghị ihe na -agbanwe. Kedu ihe mmadụ tụrụ anya ya !!